जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवन :: District Education Office Chitwan
Call: +977- 056520151
जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनको वेभसाइटमा प्रवेश गर्नु भएकोमा यहांलाइ हार्दिक स्वागत छ ।||
स्वागत छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनमा
शिक्षा चेतनाको संवाहक, विकासको मेरुदण्ड र सभ्यताको मुहान हो । शिक्षाको आदर्श, उद्देश्य र गति अनुसार नै देश विकासको मार्गचित्र कोरिएको हुन्छ । आज विश्वमा जुन देशको शैक्षिक उद्देश्य, नीति र कार्यक्रम समय सापेक्ष, व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनेको छ, विकासको गतिमा त्यहि अग्रणी रहेको देखिन्छ । शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्ति देश विकासको लागि गतिशिल र सक्रिय मानवीय साधन हो जसले अन्य सबै साधन स्रोतलाई यथोचित सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । अतः शिक्षालाई हरेक क्षेत्रको विकासको पथ प्रदर्शक एवं आधारशिलाको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्माण भएका शैक्षिक नीति र कार्यक्रमहरुलाई जिल्ला, विद्यालय/समुदाय तहमा कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दछ । शिक्षा सम्बन्धी र अन्य प्रचलित ऐन नियमहरु साथै शिक्षा मन्त्रालय एवं विभागको नीति निर्देशनको अधिनमा रही आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई सेवाग्राही लक्षित वर्ग समक्ष पुर्‍याउने र जिल्ला शिक्षा समितिबाट निर्मित जिल्ला स्तरीय शैक्षिक योजना, नीति र कार्यक्रमहरुलाई समेत कार्यान्वयन गराउने संस्थाको रुपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेको हुन्छ । यस दिशामा शिक्षाका सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छ ।
राप्ती विकास परियोजनाले २०१२ साल देखि व्यवस्थितरुपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन थालेपछि चितवन जिल्लामा शिक्षा विस्तारको कार्यक्रम शुरु भएको हो । र्सवप्रथम ४ वटा प्राथमिक पाठशालाको स्थापनाबाट शुरु भएको शैक्षिक विकासको प्रक्रिया २०७४ सालमा आइपुग्दा धेरै व्यापक र विस्तार भइ सकेको छ । यस जिल्लामा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र ५६१ सामुदायिक विद्यालय २११ प्राथमिक, ७० नि.मा.वि. ५० माध्यमिक विद्यालय र ४६ उमाविहरु तथा संस्थागत तर्फ२५ प्राथमिक २६नि.मा.वि. ९६ माध्यमिक र १७ उमावि गरी जम्मा १७१ विद्यालयहरु स्थापना भै सञ्चालनमा रहेका छन् । उपरोक्तानुसारका प्रारम्भिकबालविकास केन्द्रमा ८६४४जना तथा विद्यालयहरुमा सामुदायिक तर्फप्रा.वि.तहमा ३२६०६ जना नि.मा.वि.तहमा २३३४२ मा.वि.तहमा १४९७० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने संस्थागत तर्फ पूर्व प्राथमिक कक्षामा १४०२७प्रा.वि.तहमा ३५९७७, नि.मा.वि.तहमा १८२६७र मा.वि.तहमा १०६७९ जना विद्यार्थीहरु अध्ययरत रहेका छन् । यसरी सामुदायिक तर्फ जम्मा ७०९१८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने संस्थागत तर्फजम्मा ६४९२३ गरी जम्मा १३५८४१विद्यार्थी अध्ययनरत देखिन्छ । जस मध्ये छात्रा संख्या सामुदायिकमा ३६८२७ र संस्थागत मा २७५८८रहेको छ ।
त्यस्तै गरी चितवन जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको स्वीकृत दरवन्दी र राहत कोटा समेत गरी कुल शिक्षकहरुको संख्या प्राथमिक तहमा १८९१, नि.मा.वि.तहमा ५३८ र माध्यमिक तहमा ३९० गरी कुल जम्मा २८१९जना रहेको छ जिल्लामा बा.वि.केन्द्रको संख्या समेत उल्लेख्य रहेको छ । जस अनुसार विद्यालयमा आधारित ५४४ र समुदायमा आधारित १७ गरी जम्मा ५६१ वटा वा.वि.केन्द्रहरु सञ्चालित छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुमा कम्तिमा एउटा बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ ।
चितवन जिल्लाको उच्च शिक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गरी र्सवप्रथम २०२२ सालमा वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस स्थापना भएको र पछि केन्द्रिय कृषि क्याम्पस रामपुरको स्थापनाले चितवनको मात्र नभई देशकै प्राविधिक उच्च शिक्षाको विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसरी जिल्लामा हाल २ वटा सरकारी क्याम्पस र अन्य ३० वटा क्याम्पसहरु सञ्चालित छन् जसमध्ये ९ वटा भन्दा बढि क्याम्पसहरुमा स्नातकोत्तरसम्मको पर्ढाई सञ्चालन भइरहेको छ । यसले अन्य जिल्ला भन्दा तुलनात्मक रुपमा चितवन जिल्लामा उच्च शिक्षाको विकासको अवस्था राम्रो रहेको झल्काउँछ । साथै चितवनमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना हुनुले जिल्लाको शिक्षा विकासको सर्न्दभमा एउटा नयां आयाम थपिएको छ । चितवनको शिक्षा विकासको सर्न्दभमा उल्लेखनिय कुरा के पनि छ भने नीजि स्तरमा हाल भरतपुरमा २ वटा मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सञ्चालित छन् । यस जिल्लाका साक्षरता प्रतिशत महिलाको ९६.४र पुरुषको ९८.६ गरी जम्मा ९७.५रहेको छ । शिक्षा चेतनाको संवाहक, विकासको मेरुदण्ड र सभ्यताको मुहान हो । शिक्षाको आदर्श, उद्देश्य र गति अनुसार नै देश विकासको मार्गचित्र कोरिएको हुन्छ । आज विश्वमा जुन देशको शैक्षिक उद्देश्य, नीति र कार्यक्रम समय सापेक्ष, व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनेको छ, विकासको गतिमा त्यहि अग्रणी रहेको देखिन्छ । शिक्षाले उत्पादन गरेको जनशक्ति देश विकासको लागि गतिशिल र सक्रिय मानवीय साधन हो जसले अन्य सबै साधन स्रोतलाई यथोचित सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । अतः शिक्षालाई हरेक क्षेत्रको विकासको पथ प्रदर्शक एवं आधारशिलाको रुपमा लिन सकिन्छ ।